प्रत्यक्ष Pirate Bay - संगीत, चलचित्रहरू, नि: शुल्क डाउनलोड गर्नुहोस्!
समुद्री डाँडमा तपाईंको अनुभवलाई उत्तम पार्ने उत्तम तरिकाहरू [अप्रिल २०१ 2019 अपडेट गरियो]
समय सापेक्षिक हुन सक्छ, तर यो पनि सीमित छ। त्यहाँ धेरै दिनहरू छन् जुन हामीले हाम्रो ग्रहमा खर्च गर्नुपर्‍यो। ढिलो टोरेन्टमा पर्खनु हामी यी क्षणहरू कसरी प्रयोग गर्दैछौं भन्ने हुनुहुन्न।
समुद्री डाकू बे तपाईले चाहानु भएको सामग्रीमा छिटो र प्रभावशाली पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिष्ठा रहेको छ। यो प्रतिष्ठा हो किनभने धेरै व्यक्तिले एकसाथ बिडिंग र अपलोड प्रक्रियामा लगातार योगदान पुर्‍याउँछन्, समान विचारयुक्त प्रयोगकर्ताहरूको समुदाय सिर्जना गर्न मद्दत गर्छन् जुन एक अर्कालाई समर्थन गर्दछ।
तपाईं यहाँ पाइरेट बे बारे थप जान्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं प्लेटफर्मसँग परिचित हुनुहुन्न भने: https://www.thepiratebay.wiki।
जब तपाईं ढिलो टोरेन्ट सामना गर्नुहुन्छ, यो सिडरहरूको कमी वा फाईल फाइल सामग्रीको अभावले हुन सक्छ। औसत प्रयोगकर्ताको लागि, मुद्दा पाइरेट बेमा होईन। यो उनीहरूको घरमा सेटअपको साथ हो।
तपाईको डाउनलोड गति सुधार गर्न सजिलो तरीका
यो याद राख्नु आवश्यक छ कि डाउनलोड र अपलोड गति जुन तपाईंको ISP ले तपाईंलाई तिनीहरूको बिक्री पिचको बखत उद्धृत गर्दछ तपाईंले अधिकतम हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राय: क्षेत्रहरू विरलै यी विज्ञापन दरहरू नजिकै पुग्छन्। औंठाको सामान्य नियमको रूपमा, यो उत्तम विचार हो कि तपाईंलाई उत्तम अनुभव प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ भन्दा 50०% द्रुत गति अर्डर गर्नु राम्रो विचार हो।
यसको मतलब यदि तपाई Internet० एमबीपीएस तपाईको इन्टर्नेट को गति को आवश्यकताहरु को लागी पर्याप्त छिटो छ भन्ने लाग्छ भने, त्यसोभए तपाईले M। एमबीपीएस को लागी अप्ट गर्नु पर्छ
यो याद राख्नु पनि महत्वपूर्ण छ कि एमबीपीएस र एमबीपीएस बिभिन्न पदनाम हुन्। यदि तपाईंसँग १.4444 एमबीपीएस छन् भने त्यो लगभग ११. M एमबीपीएस बराबर छ। "B" ठूला अक्षरमा राख्नु भनेको तपाइँ प्रति सेकेन्ड मेगाबाइटबाट मेगाबाइटमा सर्दै हुनुहुन्छ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो वेगलाई अप्टिमाइज गर्नुभयो, त्यसपछि यहाँ डाईरेक्ट बेमा तपाईंको अनुभव सुधार गर्ने केही थप तरिकाहरू छन्।
१. तपाईंको राउटर र मोडेम जाँच गर्नुहोस्
यदि तपाईं ढिलो इन्टरनेट जडानको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, तब तपाईंको मोडेमलाई दोष लाग्ने सम्भावना छ। तपाईंले डाटा ड्रपआउटको सामना गर्नुपर्दा तपाईंले के गर्नु हुन्छ? तपाईंले मोडेम रिसेट गर्नुभयो। यदि त्यसले काम गरेन भने तपाईं राउटर अनप्लग गर्नुहोस्, र फेरी पुन: प्लग इन गर्नुहोस्। तपाईंले यि उपकरणहरू अपग्रेड गर्न आवश्यक पर्दछ यदि यदि तपाईंले टोरेन्ट गर्ने बखत लगातार विच्छेदहरू अनुभव गर्नुभयो।
२. तपाईंको प्रणाली स्क्यान गर्नुहोस्
के तपाईंलाई थाहा छ अन्तिम चोटि कहिले तपाईंको प्रणालीमा भाइरसहरूको लागि स्क्यान गरिएको थियो? मालवेयर, ट्रोजनहरू र अन्य अनावश्यक वस्तुहरूले तपाईंको कम्प्युटरको स्रोतहरू खत्तम गर्न सक्छन्। जब त्यो हुन्छ, तपाईंको गति परिणामको रूपमा ग्रस्त हुन्छ। दैनिक स्क्यान गर्न यो उपयोगी हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईं टोरेन्टहरू अक्सर डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने।
Your. तपाईंको प्रणालीमा हस्तक्षेप कम गर्नुहोस्।
त्यहाँ Webroot नामको उत्पादन छ जुन Mac® मा अपरेट गर्दछ। यदि यो अपरेशनल छ, तब यसले प्रणालीमा हस्तक्षेप गराउँछ ताकि तपाईं अब श्रुतिलेख कार्यहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। आवाज सक्रियता विन्डो पप अप गर्नका लागि तपाईंले सफ्टवेयर बन्द गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ धेरै प्रोग्रामहरू र प्लेटफर्महरू छन् जुन डाउनलोड प्रक्रिया वा इन्टरनेट गतिको साथ हस्तक्षेपको कारण हुन सक्छ।
You. के तपाईं अझै पनि फिल्टर चलाइरहनु भएको छ?
यदि तपाईं आफ्नो ईन्टरनेटको लागि ब्रॉडब्यान्डको सट्टा DSL जडानमा हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईंको फिल्टरको गुणवत्ता एक मुद्दा हुन सक्छ। लाइनमा हुने गडबडीले अचानक ड्रप निम्त्याउँदछ, तपाईंलाई पुनः जडान गर्न बाध्य पार्दै। विचार गर्न यस विशिष्ट अवस्थामा अर्को समस्या एक वायरलेस फोनको उपस्थिति हो। एक विशेष इकाईले तपाईंले पाइरेट बेको साथ अनुभव गरिरहनु भएको समस्याहरू सिर्जना गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्न एक्लोसन टेस्टमा जानुहोस्।
#।। तपाईंसँग साइटमा ISP ब्लक छ।
केहि आईएसपीहरूले सम्पूर्ण प्लेटफर्म रोक्दछ जब तपाईं समुद्री डाकू बे पहुँच गर्न को लागी। केहि सामग्री ब्लक गर्न को लागी काम गरीरहेछ कि उनिहरुलाई शंका छ कि कपीराइट छ। यदि तपाईंले यस्तो अवस्था सामना गर्नुभयो भने, त्यसो भए मर्मत गर्ने मिरर साइटहरू मध्ये एक प्रयोग गर्न सहयोगी हुन सक्छ: https://tpb.wiki/।
#।। प्रत्यक्ष जडान सिर्जना गर्नुहोस्।
यदि तपाईं समुद्री डाकू खाडी पहुँच गर्दा वायरलेस रूपमा सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको कनेक्शन गति सँधै अलि ढिलो हुनेछ। तपाईं यसको सट्टा मोडेममा प्लगइन प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ यदि तपाईंसँग यो कर्ड छ भने यो विकल्प समायोजन गर्न पर्याप्त लामो छ। त्यसोभए २०१ 2019 मा पाइरेट बेको लागि उत्तम काम गर्ने ऐना पहुँच गर्ने प्रयास गर्नुहोस् यदि सम्भावित ISP मुद्दाको लागि workaround छ कि भनेर हेर्नका लागि: पाइरेट बे।
त्यहाँ विचार गर्न केहि अन्य हस्तक्षेप मुद्दाहरू हुन सक्छन्। केहि प्रकारको पुरानो टेलिभिजन बक्सहरूले तपाईंको इन्टरनेटमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ, यदि तिनीहरू कुनै संसाधनहरू पहुँच नगरे पनि। तपाईंको केबलको लम्बाइ वा उमेर समस्याग्रस्त पनि हुन सक्छ। तपाईंको अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको साथ बाह्य हस्तक्षेप पनि हुन सक्छ।
एकचोटि तपाईको छिटो डाउनलोड गति अवरुद्ध गर्ने सम्भावित मुद्दाहरूको क्रमबद्ध गर्नु भएपछि, तपाईं समुद्री डाकू बेले दिनहुँ उपलब्ध गराउने सबै बिरानो सुविधाहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।